Wakiiladii Jaaliyadaha Qurba jooga u dhalatay deegaanka uga qayb galay shirwaynihii 8aad ee XDSHSI oo xaflad casho sharaf ah loogu sameeyay guriga martida ee qaryaan dhoodaan. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Talaado Oct14,2014. Waxaa ka dhacay guriga martida ee qaryaan dhoodaan Xaflad casho sharaf ah, oo uu soo diyaariyay xafiiska maamulka DDSI. Xafladan casho sharafta ah oo loo qaybtay ergooyinkii iyo wakiiladii uga qaybgalay qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku dhaqan dhamaan daafaha aduunka shirwaynihii 8aad ee XDSHSI. Ayaa waxaa kala soo qayb galay masuuliyiin sar sare oo ay ka mid yihiin wasiirka madaxtooyada DDSI mudane ahmed maxamed shugir, madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane cabdicasiis maxamed cabdi, maareeyaha wakaalada qurba joogta DDSI mudane cabdibari macalin maxamed ku xigeenka wakaalada qurba joogta DDSI mudane cadbi khafiil dhoonbe, iyo waliba masuuliyiin kale.
Xafladaa casho sharafta ah ayaa waxaa ugu horayntii furay maareeye ku xigeenka walaalada qurba joogta DDSI mudane cabdi khaliif dhoonbe oo ka waramay ujeedada xladan loo qaybtay taasi oo uu sheegay in ay tahay sii xoojinta iyo dar dargalinta xidhiidhka ka dhexeeya qurba joogta iyo guud ahaanba DDSI. Waxaa kale oo ka hadlay xafladan madaxa xarunta dhexe ee XDSHSI mudane cabdicasiis maxamed cabdi wuxuuna sheegay in uu siwayn uga faraxan yahay uguna mahadceliyano qurba joogtan sida dareenka wadaninimada leh ee ay uga soo qaybgaleen una taageereen shirwaynihii 8aad ee XDSHSI. Iyo waliba sida meeqaamka sare leh ee ay qurba joogtu markasta ugala qaybqaadaan xukuumada iyo hawlaha horumarka ka socda deegaanka.
Waxaa kale oo uu si qoto dheer uga warbixiyay qorshayaasha horumarineed ee u jeexan Xisbiga gaar ahaan dhinaca qorshayaasha ku aadan sii xoojinta iyo dar dargalinta xidhiidhka qurba joogta. Waxaa uu si mug leh ugu booriyay qurba joogtan u dhalatay deegaanka in ay si mug leh u sii xoojiyaan ka qayb qaadashada hawlaha horumarka gaar ahan maalgashiga ay ka wadaan deegaanka.
Wasiirka madaxtooyada DDSI mudane ahmed maxamed shugri oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in ay xukuumadu si balaadhan ugu mahadnaqayso kala soo qayb galka shirwaynihii 8aad ee ka dhacay xarunta gobolka nogob ee magaalada fiiq, isaga oo ka warbixiyay fahan dheerna ka siiyay qurba joogta sharciyada iyo noocyada shirarka XDSHSI. Wuxuuna ugu mahadnaqay dhamaanba qurba joogta u dhalatay deegaanka in sida ay markasta uga qayb qaadaan kor uqaadida koboca dhaqalaah maalgashiga iyo ladagaalanka saboolnimada ee ay xukuumada dadaalka dheer ugu jirto.
Qaarka mid ah qurba joogtan casho sharafta oo ka hadlayay madashaasi ayaa waxay si mug leh ugu mahnaqeena sida diiran ee ay xukuumadu u soo dhawaysay uguna fidisay martiqaadka in ay ka soo qayb galaan shirwayanahihii 8aad ee sida cad cadaanta dimuqoraadiyada leh uga dhacay xarunta gobolka nogob ee magaalada fiiq. Waxaa kale oo ay ugu mahad celiyeen xukuumada sida habsamida leh oo ay u soo afjartay hogaaminta xukuumadu khilaafkii ay xubno ka mid ah xukuumadu isku dayeen in ay deegaanka dib ugu celiyaan dib u dhacyadii iyo hagardaamooyinkii hore u soo ragaadiyay shacabka deegaanka. Waxa kale oo xusud mudan in ay qurba joogtan loo sameeyay casho sharafta ka mid ahaayeen xubno wakhtiyadii hore dhex mushaaxi jiray beentii iyo mala awaalkii hagaadhii ka dabar go’ay dalka iyo dibadaha ee UBBO.
Kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen fanaanka wayne cabdirahmaan koronta iyo sahra cabdi kuhaad. Xubahan oo garwaaqsaday xaqiiqda iyo horumarka xawliga ku socda ee ka jira deegaanka yidhi cad ceed soo baxday sacabo laguma qarin karo ayaa xukuumaduna si fiican u soo dhawayay go’aanka xaqiiqda ah ee ay qaateen.